manual ဘဏ်ကတ် Code ကိုပရင်တာ, PVC Card ကိုခုံး Code ကိုပရင်တာ, PVC Card ကိုဖောင်းကြွစက်, Plasitc ကတ်ခုံး Code ကိုပရင်တာ, ပလပ်စတစ်ကဒ်ဖောင်းကြွစက်, PVC ပလတ်စတစ်ကတ်ဖောင်းကြွစက်
PVC Card ကိုခုံး Code ကိုပရင်တာ, PVC ပလတ်စတစ်ကတ်ဖောင်းကြွစက်
Card အားခန့် / ဆက်စပ်ပစ္စည်း manual ဘဏ်ကတ် Code ကိုပရင်တာ, Plasitc ကတ်ခုံး Code ကိုပရင်တာ, ပလပ်စတစ်ကဒ်ဖောင်းကြွစက်, PVC Card ကိုခုံး Code ကိုပရင်တာ, PVC Card ကိုဖောင်းကြွစက်, PVC ပလတ်စတစ်ကတ်ဖောင်းကြွစက်
PVC ပလတ်စတစ်ကတ်ဖောင်းကြွစက် Mall တစ်ခုစံပြရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသည်, ဖျော်ဖြေရေးနေရာများ, ဘဏ်များ, အာမခံကုမ္ပဏီများသည်, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဒ်ဆိုင်များ, ကဒ်စက်ရုံတွေ, နှင့်အသေးစားနှင့်အလတ်စားပုံနှိပ်စက်ရုံများအားလုံးစက္ကူအမျိုးမျိုးနှင့် PVC plasitc ကတ်များထုတ်လုပ်နိုင်ရန်.
1, ဇာတ်ကောင်ရွေးချယ်ရေး: chrysanthemum အမျိုးအစားဇာတ်ကောင် rotary ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု
2, ၏စကားလုံးနှင့်အတူစက် 66
အကြီးစားအင်္ဂလိပ်အက္ခရာများ(26): A-Z ကို
အသေးစားသင်္ကေတများ(8): & `, .- / ()
အကြီးစားသင်္ကေတများ(10): .- / ()：NO မူရင်း¥
ပြားစေ modify(2): ■■
3, ဇာတ်ကောင်: အထူးအက္ခရာများကိုသုံးပါက ISO စံအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခရက်ဒစ်ကဒ်ဖြည့်ဆည်း,PVC ကတ်သက်ဆိုင်သောစံချိန်စံညွှန်းများ, ကြောင်း 85.5mm က x 55mm ဖြစ်ပါသည်
4, ၏ကြားကာလ 2,
1/10 တစ်လက်မ၏ (အသုံးပြုမှုအတွက်ဒဏ်ငွေပုံနှိပ်ဖို့ကန့်သတ်)
5, စစ်ဆင်ရေး: လက်စွဲခုံးစကားလုံးလိုင်းများ: လိုင်း 1-11
6, ခုံးစကားလုံးအနေအထားကိုညွှန်ပြချက်: အဆိုပါညွှန်ပြအပ်နှင့်ကတ်များ
7, အသံအတိုးအကျယ်: 340270 × 165mm × (L ကို× W × H ကို)
8, စက်အသားတင်အလေးချိန်: 9ကီလိုဂရမ် (10.5KG ထုပ်ပိုး)
2, ၏စကားလုံးနှင့်အတူစက် 68
အကြီးစားသင်္ကေတများ(12): .- / ()：NO မူရင်း¥ $ £
manual ဖောင်းကြွစက် function ကို PVC ကတ်များရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာခုံးဖြစ်ပါသည်, သက်သေပြခြင်းနှင့်ထူးခြားသောနှင့်အတူ PVC ကဒ်ဖြစ်စေခြင်းငှါမီးမောင်းထိုးပြအက္ခရာများနှင့်နံပါတ်များကိုနှိပ်.
ခုံးကုဒ်စက်စျေးကွက်အပေါ်ကို manual နှင့်လျှပ်စစ်နှစ်မျိုးလုံးရှိပါတယ်. manual ဖောင်းကြွစက်စျေးနှုန်းများအတော်လေးစျေးပေါခဲ့ကြသည်, သုံးစွဲဖို့အတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့, လက်စွဲဖောင်းကြွစက်ကိုအသုံးပြုပြီးလုပ်နိုင်အောင်အသေးစားနှင့်အလတ်စားအဖွဲ့အစည်းများ. ဒီအစက်ဖွဲ့စည်းပုံယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်ပါသည်, တိကျမှန်ကန်တည်နေရာ, သေးငယ်တဲ့အရွယ်အစား, လှပသောအသွင်သဏ္ဌာန်, လည်ပတ်ရန်လွယ်ကူ.
ဒါဟာမောလ်များများအတွက်စံပြရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသည်, ဖျော်ဖြေရေးနေရာများ, ဘဏ်များ, အာမခံကုမ္ပဏီများသည်, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဒ်ဆိုင်များ, ကဒ်စက်ရုံတွေ, နှင့်အသေးစားနှင့်အလတ်စားပုံနှိပ်စက်ရုံများအားလုံးစက္ကူအမျိုးမျိုးနှင့် PVC plasitc ကတ်များထုတ်လုပ်နိုင်ရန်.
ငါသည်သင်တို့၏ထုတ်ကုန် PVC Card ကိုခုံး Code ကိုပရင်တာကိုစိတ်ဝင်စားမိပါတယ်, PVC ပလတ်စတစ်ကတ်ဖောင်းကြွစက်
prev: manually ကြေးဝါစက်
နောက်တစ်ခု: PVC Card ကိုကော် Patch, ဝန်ထမ်းကတ်စတစ်ကာများ